Tababar lagu baranayo baarista Dukumeentiyada oo Saraakiisha Hay’adda Socdaalka uga furmay qaar kamid ah Gobolada dalka+Sawirro. – Radio Muqdisho
Tababar lagu baranayo baarista Dukumeentiyada oo Saraakiisha Hay’adda Socdaalka uga furmay qaar kamid ah Gobolada dalka+Sawirro.
Tababaro ku saabsan Socdaalka gaar ahaan baarista Dukumeentiyada safarka ayaa uga socda Saraakiisha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ee ka howlgala Laamaha ay Hey’addu ku leedahay gobolada dalka.
Tababaradaan oo ay bixinayaan Tababarayaasha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ee khibradda u leh baarista dukumeentiyada safarka iyo arimaha socdaalka, ayaa ujeedadiisu tahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoontooda guud ahaan saraakiisha ka howlgasha laamaha Hey’adda.
Tababaradan ayaa si isku mid ah uga furmay laamaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ay ku kala leedahay gobolada dalka, gaar ahaan magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo, Baladweyne, Dhuusamareeb,Gaalkacyo, Garoowe iyo Boosaaso.
Hogaanka Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda JFS oo uu horkacayo Agaasimaha Guud G/sare Maxamed Aadan Koofi ayaa muddooyinkii dambe kordhiyay Tababarada lasiinayo Howlwadeenada Hay’adda ee ka howlgala Gudaha Caasimadda Muqdisho iyo Gobolada dalka si loo dar dargaliyo howlaha Hay’addu u heyso bulshada.
Madaxweyne Lafta-gareen oo Xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday Finland.
Guddoomiyaha Cusub ee degmada Shingaani oo xilka la wareegay+Sawirro